Kantiibaa Galaan duraanii dabalatee namoonni 12 malaammaltummaan shakkamanii to’annoo jala oolan });
Kantiibaa Galaan duraanii dabalatee namoonni 12 malaammaltummaan shakkamanii to’annoo jala oolan
Kantiibaa Galaan duraanii dabalatee hoggantoonni waajjiraalee 12 malaammaltummaan shakkamanii har’a to’annoo jala oolfaman.
Koomiishinarri Koomiishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa obbo Taakkalaa Inkoosaa akka himanitti, kantiibaa magaalaa Galaan duraanii obbo Mulgeetaa Kabbadaa fi itti gaafatamaa waajjira invastimantii magaalattii, itti gaafatamaa waajjira misooma lafaa fi maanaajimantii, kaabinee magaalattii fi itti gaafatamtoonni biroos to’annoo jala oolfamaniiru.
Koomiishinichi namoota kanneenirratti ji’ootan dura qorannaa gaggeessaa kan ture wayita ta’u, yeroo taayitaarra jiran kenniinsa eeyyama invastimantiin, qonnaan bultoota sababii ijaarsa baaburaatin kaafamaniif beenyaa kanfalamuu male kanfaluu dhabuu fi ofii fayyadamuu, iddoo bakka bu’iinsa lafaa nama hin malleef laachuu, lafa duraa warra hin qabne fakkeessuun laachuun malaammaltummaan shakkamaniiti to’annoo jala kan oolfaman jedhame.
Proojaktoota mootummaa magaalattiitti ijaarramaa turan adeemsa faaynaansiin ala hojjechuun faayidaa qooddachuunis shakkamaniiru.
Shakkamtoonni qorannoon isaanii gaggeeffamaa kan jiru wayita ta’u, booru mana murtiitti akka dhiyaatanis odeeffannoon ni jira.
Shakkamtoota dabalataas to’annoo jala oolchuuf socho’amaa jira jedhameera.